Askarta Dowlada Federaalka Oo Darawal Ku Dilay Muqdisho. – Calamada.com
Askarta Dowlada Federaalka Oo Darawal Ku Dilay Muqdisho.
calamada December 22, 2016 1 min read
Saacadihii lasoo dhaafay askari ka tirsan dowlada Ridada federaalka waxa uu si bareer ah gudaha magaalada Muqdisho ee caasimada dalka SomaliÂ ugu toogtay ruux shacab ah oo ku sugnaay isgoyska KM4 ee degmada Hodan.
Ruuxa shacabka ee askariga ka tirsan maamulka Garguurte sida bareerka ah u dilay ayaa ka mid ahaa darawalada kaxeysa Mootada Bajaajta oo ah moota si aad ah looga isticmaala magaalada Muqdisho.
Askariga ayaa darawalka Mootada weydiistay lacag baad ah balse darawalka ayaa diiday inuu lacagta bixiyo kadibna askariga ayaa dhowr xabadood ku furay darwalka taasi oo sababtay in isla goobta uu ku geeriyooda.
Dilkan waxa uu qeyb ka noqonayaa dhibaatooyinka joogtada ah ee Kufaarta Afrikaanta iyo maleeshiyaatka dowlada federaalka ku hayaan dadka shacabka ee ku dhaqan goobaha shisheeyaha kaga suganyihiin Konfurta iyo bartamaha dalka Somali.
Maalmo ka hor ayeey aheed markii gaalada soo duushay ay si bareer ah duleedka degmada Qoryooley ee gobalka Shabeelada hoose ugu xasuuqeen tiro dad shacab ah oo gaari Hoomey la socday.
Previous: Dhageyso Darsiga 28-aad Ee Kitaabka Akhlaaqul Mujaahid.
Next: Weerar Ka Dhacay Duleedka Magaalada Beledweyne.
DHAGEYSO: Dersiga 26-aad Ee Xalaqaatka “Masaa’il ku saabsan Sowmka” Ka Faa’iidaysi wacan.
DHAGEYSO: Dersiga 25-aad Ee Xalaqaatka “Masaa’il ku saabsan Sowmka” Ka Faa’iidaysi wacan.
DHAGEYSO: Dersiga 24-aad Ee Xalaqaatka “Masaa’il ku saabsan Sowmka” Ka Faa’iidaysi wacan.
DHAGEYSO: Dersiga 23-aad Ee Xalaqaatka “Masaa’il ku saabsan Sowmka” Ka Faa’iidaysi wacan.
DHAGEYSO: Dersiga 22-aad Ee Xalaqaatka “Masaa’il ku saabsan Sowmka” Ka Faa’iidaysi wacan.
DHAGEYSO: Dersiga 21-aad Ee Xalaqaatka “Masaa’il ku saabsan Sowmka” Ka Faa’iidaysi wacan.
Sawirro+Warbixinno: Mukhayam Cilmiyeed Loo Qabtay Ardayda Wilaayaadka.
Sawirro+Warbixin: Ceelbaraf iyo ciidamadii Burundi Xalqada 3aad.
Sawirro+Warbixin: Ceelbaraf iyo ciidamadii Burundi Xalqada 1aad.
Isbitaalka Guud Ee Magaalada Ceelbuur Oo Dib Loo Furay [Sawirro].
Sawirrada Sida Looga Ciiday BuuloFulaay.
Degmada Jilib oo Ciiddan Mahrajaan Cajiib ah Lagu Soo Bandhigay [SAWIRO]
Sawirro Fantasiyo Lagu Sa Gootinayo Ciida Oo Ka Dhacday Degmooyinka Ceelbuur Iyo Xiindheere.
Sawirro Fantasiyaha Ciida Iyo Degmada Tiyeeglow.